Pananahana hormonina, Progesterone tsindrona, Oral Altrenogest Vahaolana - faharoa hormonina
Manual for vitaminina AD tsindrona [Description] entana ity dia colorless na jiro mavo mazava tsara no vokatra rano. [Andrakitra sy ny Ampiasao] ity dia ahitana vokatra vitaminina A sy D. ny otrikaina A dia afaka miasa toy ny hampandrosoana ny fitomboan'ny anima
Hormonina levitra. Io dia afaka hampiroborobo ny trondro vokatra hypophysis halefa GTH; trondro vehivavy manatsara ny follicle mba hanafina estrogen izay hanampy haingana follicle fahamatorana, ny famokarana atodinaina, ary ny famokarana ny Corpus luteum; handrisika tsirinaina famokarana sy ny fahamatorana ho an'ny lehilahy trondro. Izany dia avo-trondro mahomby odinagogue, antoka tsara indrindra ho an'ny tendrombohitra fahombiazan'ny
Tsy mikendry ny ho mpitarika orinasa iraisam-pirenena izay manana ny toetra tsara indrindra eo amin'ny an-tsaha.
Dia hanenjika indrindra eran-mandroso ny teknolojia sy ny vato nasondrotry ny matihanina mba hamoronana faran'izay tsara sy ny tsara indrindra fanompoany, dia hahazo laza sy ny tsena anjara amin'ny soa ny fitokisana sy ny tsy fivadihana ary koa ny miovaova toetra.
Ningbo Faharoa hormonina Factory dia naorina tamin'ny 1988. isika no nanolorana azy ho biby fanatodizan'ny orinasa nandritra ny 30 taona, ary mitambatra manta ara-nofo, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, fanamboarana, mandinika, varotra, ary ny mpanjifa fanohanana miaraka mba ho orinasa goavana. Dia nahazo ny orinasa ho toy ny "Zhejiang Avo-teknolojia orinasa" sy Cixi orinasa Top 20 "...
Contact us Raha mila fanazavana fanampiny, na boky fotoana